मेयरमा सक्षम महिलालाई टिकट नदिए ३३ प्रतिशत सहभागिता पु¥याउन कठिन - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०४, २०७४ समय: १०:४८:५१
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नम्बर १ निवासी भगवती पौडेलले ०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरुवात गरेकी हुन् । उनी यतिबेला नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी छिन् । त्यति मात्र नभई साबिक कोशीहरैंचा नगरपालिकाको नगर विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद समेत सम्हालेर विकास निर्माणका थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेकी छिन् । उनकै पहलमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि धेरै विकासका योजनाहरू स्वीकृत हुने क्रममा रहेका छन् । ०४६ साल र ०६२ को जनआन्दोलनमा मोरङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको नेतृका रूपमा सक्रिय भएर योगदान पु¥याएकी उनी पूर्व क्षेत्रमै मात्र नभई पार्टीभित्र केन्द्रीय तहमै चिनिएकी नेतृ हुन् ।
अवसर पाए देशको प्रधानमन्त्री भएरै सही तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने हिम्मत राख्ने उनी ०७४ बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि दाबेदार ठान्छिन् । सक्षम महिलाहरूलाई अब कांग्रेसले मात्र नभई देशमा रहेका सबै पार्टीहरूले मेयरलगायत नेतृत्व तहमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्ने पौडेल राजनीतिसँगै सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । तिनै पौडेलसँग स्थानीय निकायको निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीति र सामाजिक रूपमै यत्ति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ ।
कसरी समयको म्यानेज गरिरहनुभएको छ ?
महिला भएकै कारण चुनौतिहरू छन् । महिलाकै कारण समाजमा अगुवाइ गर्न कठिन छ । तर मेरो घरपरिवार र श्रीमान्बाट सक्दो सहयोग मिलेका कारण म अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेकी छु । समाजमा अनेक खालका आरोपहरू पनि आए त्यसलाई मैले संघर्षका रूपमा लिएँ । म कतैबाट विचलित नभई समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि, महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि म निरन्तर लागि परिररहेकी छु ।
तपाईं सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । तपाईंले गरेका सामाजिक काममध्ये उल्लेख गर्दा के के सम्झनुहुन्छ ?
साबिक हरैंचा – ५ निवासी पशुपति चौधरीका दुई छोरीहरूलाई ह्वीलचेयर वितरण गर्नुका साथै वडा नम्बर ६ निवासी एक महिला प्रसव पीडामा रहँदा उपचार खर्च जुटाएर अस्पतालसम्म पु¥याउने काम गरेकी छु । त्यति मात्रै नभई सामाजिक कार्यका रूपमा महिला तथा बालबालिकाहरूको हितका लागि काम गरँे । अस्पतालहरूमा दुःखी गरिबहरूको उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने काम गरँे । कतिपय उपचारमा छुटको व्यवस्था पनि गरेकी छु । म सामाजिक सेवा भनेपछि कहिले पछि नहट्ने महिला पनि हुँ ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने भन्ने नयाँ संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तपार्इंको अनुभवमा अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला हँुदैमा महिलाहरूका सवाल सकिन्छ भन्ने मान्यता अहिले अगाडि सारिएको छ । त्यो ज्यादै गलत छ । महिलामैत्री संविधान त बन्यो तर सो अनुसार हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान सहभागिता भएकै छैन । दुरदराजका महिलाहरू अहिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यही बीचमा सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकेसँगै मैले पनि सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेद्वारी दिने तयारी गरिरहँदा सबै पार्टीका पुरुष साथीहरूले अर्कै दृष्टिले हेर्ने काम भइरहेको छ । अहिले पनि पितृसत्तामक संस्कारका कारण महिलाहरू उपेक्षित छन् । सबै पार्टीहरूले क्षमतावान् महिला नेतृहरूलाई मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिनुपर्छ । नभए ३३ प्रतिशतको सहभागिता भन्ने कुरा केवल संविधान र कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । सबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि देशभर नै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले अभियान नै चलाउँछ ।
तपार्इँ आफूलाई आफ्नो पार्टीले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि टिकट दिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सहज तरिकाले मलाई मेयरका लागि टिकट दिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छैन । तर पनि पाउनका लागि संघर्ष गर्नेछु । यदि मजस्ता सक्षम महिलाहरूलाई मेयर पदका लागि टिकट दिइँदैन भने हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई सहभागिता गराउने भन्ने कुरा केवल भाषणमामात्र सीमित हुने छ । जसले पार्टीलाई नै नोक्सान पु¥याउँछ । यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने महिला भएकै कारण उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा उठिदिनुपर्ने भन्ने पितृसत्तामक सोच छ यो मान्य हँुदैन । आउँदो ३१ गतेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशतको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । यदि ३३ प्रतिशतको सहभागिता नगरे पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल पाउन नै सक्दैनन् । महिलाहरूले मुख्य पदमा उम्मेद्वारी नदिए प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा महिलाहरू नै पुग्दैनन् । कसैलाई काखा र पाखा नगरी योगदानको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । महिला भएकै कारण उपप्रमुखको व्यख्या र विश्लेषण कुनै पनि पार्टीले नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । उपप्रमुख होइन, प्रमुखमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
पार्टीको कामको मूल्याङ्कन र योगदानका आधारमा तपाईंलाई सरकारले नगर विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो पदमा नियुक्त गरेको छ । तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
म सुरुमा गौरववान्वित भएँ । जम्मा एक जना पश्चिममा र पूर्वमा म गरी देशभरमा नगरविकास समितिको अध्यक्ष पदमा २ जना मात्र महिला छन् । तर जे जसरी नगरको विकासका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय बीचमा समन्वय नै छैन । जसका कारण देशभरका नगरविकास समितिले सोचेअनुसारको कार्य गर्न पाएका छैनन् । म महिला भएकै कारण १ वर्षसम्म नगर विकास समितिको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिनँ । १ वर्षको प्रयासपछि मात्र काम गर्न सहजता भएको छ ।
सुरुका दिनमा सहमति जुटाउनका लागि राजनीतिक दलका पुरुष मित्रहरूले असहयोग गरे पनि हालका दिनहरूमा सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
हालसम्ममा ७० लाख बढी विकासका योजनाहरू मेरो प्रयासमा बजेट ल्याएर सडक निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण, डे«न निर्माण, वाल निर्माण, ढल निर्माण, सडक कालोपत्रे, अपांग महिलाहरूका लागि भवन निर्माण लगायतका विकासका विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । कतिपय योजनाहरू क्रमागत योजनाभित्र राखिएका छन् । बर्सेनी बजेट आउनेछ । आगामी वर्षका लागि पनि धेरै योजनाहरू शहरी विकास मन्त्रालयसँग माग गरेकी छु । करिब १ करोड बराबरका विकास योजनाहरू मन्त्रालयमा माग गरेकी छु । जसमा शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी सकारात्मक हुनुहुन्छ । नगरविकास समिति सञ्चालनका लागि १ रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कार्यालय पनि सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । नगरविकास समितिको कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
नगरका जनताहरूको विकासप्रतिको अपेक्षा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो नि ?
नगरवासीहरूको विकासप्रतिका अपेक्षा ठूला छन् । अझै पनि विकासका योजनाहरू टाठाबाठाहरू भएका स्थानमा मात्र गइरहेका छन् । नगरपालिकाको पहुँच नभएका वडाका बासिन्दाहरू रहेका स्थानहरूमा विकासका योजनाहरू गएकै छैनन् । विकासका लागि जनताहरू नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तयारी अवस्थामा बसेका छन् । अबका दिनमा विकासका योजनाहरू समान तरिकाले आवश्यकताका आधारमा दुरदराजका वडाका टोलटोलमा लैजान जरुरी छ भन्ने मेलै अनुभव गरेकी छु ।
तपाईंले आफूलाई मेयर पदको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ । यो नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि तपार्इंका योजनाहरू केके छन् ?
सबैभन्दा पहिला दीर्घकालीन विकासका योजना बनाएर अगाडि बढ्नेछु । सुन्दरहरैंचाभित्र रिङरोड बनाउने योजना, ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने छु । मापदण्ड अनुसार घर तथा भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने छु । जग्गाहरू अनावश्यक रूपमा प्लटिङ गरिएका छन् । त्यस कार्यलाई पनि व्यवस्थित गर्ने योजना छ । नेपालकै नमूना नगर बनाउनका लागि विशेष योजनाका लागि विशेषज्ञहरूको टोलीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छु ।
यदि तपाईले मेयरका लागि टिकट पाउनुभयो भने चुनावी एजेण्डाहरू चाहिँ के राख्नुभएको छ ?
सर्वप्रथम त विकासका योजनाहरूलाई नै म चुनावी एजेण्डाहरू बनाउने छु । त्योसँगै महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनका लागि उनीहरूको इच्छाअनुसार नेतृत्व विकाससँगै सीपमूलक तालिम प्रदान गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको राम्रो बजारको व्यवस्था गर्ने, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, वातावरणीय, शैक्षिक, व्यापारिक र विकासका हिसाबले नमूना बनाउनका लागि योजनाहरू ल्याउने लगायतका एजेण्डाहरू अगाडि सार्ने सोचाइ छ ।
निजी क्षेत्रसँग यहाँ कसरी सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त ?
निजी क्षेत्रबिना नगरको विकास सम्भव छैन । त्यसैले सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने छु । व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनका विशेष सुरक्षा र सुविधाका लागि पनि सहकार्य गरिने छ । विकासका लागि साझेदार संस्थाका रूपमै निजी क्षेत्रहरूलाई लैजाने योजना पनि रहेको छ ।
नगरलाई आर्थिक क्षेत्रमै सक्षम बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकासका योजनाहरू पूरा गर्न सकिँदैन । जनताहरूको विकासप्रतिको रुचि हेर्दा स्थानीय स्रोतबाट बजेट जुटाउनेसँगै केन्द्रीय तहबाट पनि विशेष पहल गरी बढीभन्दा बढी बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसको अलवा संघीयताअनुसार नै राजस्व संकलन, कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । नगरवासीलाई कर तिर्न जाउँजाउँ भन्ने भावना जागृत गराउने खालका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले ल्याउनुपर्छ र विकासलाई समान तरिकाले सबै क्षेत्रमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह कस्तो पाउनुभएको छ ?
गाउँ निर्वाचनमय भएको छ । जनताहरू मत हाल्न एकदमै उत्साहित छन् । सरकारले निर्वाचन रोके पनि जनता मतदान गर्न नरोकिने अवस्थामा छैनन् । अब हाम्रो भनाइको सुनुवाइ हुने भयो भन्नेमा जनताहरू छन् । जनताहरूले सक्षम व्यक्तिलाई मेयर उपमेयरमा जिताउने भनिरहेका छन् ।
धनन्जय श्रेष्ठ प्रवाशी व्यवसायी हुनुहुन्छ । २०२५ सालमा काठमाडौमा जन्मनुभएका श्रेष्ठ १९८८ मा रुसको मस्कोमा अध्ययनको लागि ...